Rinotevera EARTH ZUVA 2018 ichave Kubvumbi 22 | Green Renewables
Tomàs Bigardà | | Simba rekuchengetedza, Renewable simba, Environment
Zuva rePasi 2018 richapembererwa musi waApril 22 senge gore rega. 1970 raive gore rekutanga iro Ini ndinopemberera chiitiko ichi; uye izuva rakakosha kwazvo kubvira pakapembererwa kuzvarwa kwenyika yedu.
Nehurombo, Planet Earth inoda isu nhasi kupfuura nakare kose, saka kusimudzira kuziva kuti tichataura nezveZuva rePasi 2017, maitiro aya akamuka sei uye zvimwe zviito zvatingaite kuziva nekuchengetedza zvirinani nzvimbo yatinogara.
1 Ranga riini Zuva rePasi 2017
2 Chii chinonzi Zuva rePasi uye rinopembererwa sei?
3 Zuva repasi, maitiro ekupemberera? yatove ye2018.
Ranga riini Zuva rePasi 2017
Ekupedzisira Kubvumbi 22nd yaive Zuva rePasi 2017. Tese tine nzira dzakawanda dzekubatsira, nzira dzisingaperi dzekushandira pamwe. Mukutaura, usakanganwa kukosha kwakaita iyo kushandiswa kwesimba rinowedzerwazve, simba rakachena panzvimbo pekushandisa zvisaririra kana kusvibisa simba.
Kune rimwe divi, hazvina kuipa "kutambisa nguva" kudzidza zvakawanda nezvesimba rinowanikwazve, sekutarisa iyo zvinyorwa Nationa Geographic, mavhidhiyo akati wandei epa youtube, ...
Tora mukana we chengetedza mvura uye dzidza maitiro atingaite kuti tiichengetedze, chinhu chakakosha che kupona kwedu, enda kumitambo yekusimudzira kana paine, chengetedza simba kugadzirisa mashandiro emagetsi, tarisa kune avo vari munyika vanoshaya mvura yakachena, kunyorera mari inowedzerwazve. Chaizvoizvo, nekushandisa kwakanaka kwe simba rinodzokororwaKune zviuru zvezvinhu zvekuita.
Chii chinonzi Zuva rePasi uye rinopembererwa sei?
El Zuva rePasi maka gore rega rega chirangaridzo chegore rekuzvarwa, muna 1970, chesangano renharaunda sekuziva kwedu nhasi.
Zuva rePasi (Kubvumbi 22) rakatanga kupembererwa musi waApril 22, 1970, apo American Senator Gaylord Nelson akakurudzira vadzidzi kuvandudza zvirongwa zvekuzivisa nezvezvakatipoteredza munharaunda dzawo.
Gaylord Nelson, Senator kubva kuWisconsin, ndiye akaronga kuratidzira kukuru kwekutanga kwezvakatipoteredza muUnited States kuunganidza vezvematongerwo enyika, kuwedzera kune kumanikidza ivo kusanganisira dambudziko renharaunda nharaunda pane nyika nyika ajenda.
Mutambi wacho aive akabudirira uye muchokwadi, yakave kuratidzwa kukuru kwazvo munhoroondo. Vanhu vanobva kwakasiyana hupenyu vakapinda mu kufora, misangano, misangano uye hurukuro munyika yose. Kunyangwe kongiresi yakamiswa kuitira kuti vezvematongerwo enyika vakwanise kuenda kumitambo yekumusha kwavo, uye mota dzaisatenderwa kutyaira zuva rese paFifth Avenue muNew York, kuitira kudzikisira kusvibiswa kwemaawa akati wandei.
Pakazvarwa Zuva rePasi, Gaylord Nelson akanyora kuti: "Kwaingova kubheja, asi kwakashanda." Zvechokwadi, Zuva rekutanga rePasi, akabudirira kugadzira iyo United States Environmental Protection Agency (EPA) uye, mukuwedzera, akabudirira kutora mutemo we "Mhepo Yakachena, Mvura Yakachena, uye Zvisikwa Zviri Mungozi" (Mhepo Yakachena, Mvura Yakachena uye Mhando Dziri Mungozi).
Mushure mekupemberera kweiyo yekutanga Zuva rePasi ra2017, United States Congress yakadzika mitemo makumi maviri nesere yakanangana nekudzivirira mweya watinofema, mvura yatinonwa, zvisikwa zvedu zviri panjodzi nenzvimbo dzavanogara, uye kudzora tsvina ine chepfu.
Zvinosuruvarisa, uye kunyangwe paine kuedza nhasi, iyi mitemo haisi kuteverwa muUnited States uye mune mamwe matunhu epasi. Mazhinji acho akagadzira kutenda kune kupemberera kweZuva repasi.
Muenzaniso weiyo ndeyekuti zvakatora makore makumi maviri kuti Zuva rePasi rionekwe seNyika. Kusvikira iyo 1990, ndipo pakave Zuva rePasi rakava chiitiko chepasirese, sezvachakaungana Mamiriyoni mazana maviri evanhu munyika zana negumi nemana uye yakaita chinzvimbo chakakosha munyaya dzezvakatipoteredza pasi rese.
Zuva repasi, maitiro ekupemberera? yatove ye2018.
Chinja mabhuru ako. Fluorescent kana LED mababu anoshandisa mashoma simba pane akajairwa mababu kuti ape yakaenzana mwenje wechiedza, uye anogara kusvika gumi kagumi kureba.
Dyara muti. Nezuva reArbor (Kubvumbi 27) mazuva mashoma apfuura. Waive mukana wakanaka wekudzidzira kudyara muti wemichero kana chero imwe mhando yemuti! Izvo zvakakosha, sezvo miti inobvisa CO2 kubva mumhepo uye inobatsira kurwisa kudziya kwepasi.
Dzima mwenje uye ubudise majaja efoni. Iyi haigone kuve nyore.
Edza kuwacha mbatya "uchiziva." Panzvimbo pekuchengetedza murwi wehembe kuti ugeze mbichana neMugovera kana Svondo masikati, zviite husiku kana mari yesimba yakaderera. Kana iwe uchifanira kusuka mbichana masikati, edza kuturika mbatya dzako kunze mukati pachinzvimbo chekushandisa iyo yekuomesa yakaoma.
Uyezve edza zvimwe zvigadzirwa zvekushambidza eco, Iwe unogona kunyange kuyedza kugadzira yako wega yekugezesa sipo.
Tyaira kune yekumhanyisa muganho. Izvi zvinogona kuve zvakaomesesa, asi zvinokuchengetedza mafuta.
Uya nehombodo yako yemvura. Inoderedza huwandu hwemarara epurasitiki emvura anoungana kutenderera pasirese. Unogona kutenga imwe aruminiyamu bhodhoro uye iwe uchaponesa zvakawanda.
Dzokorora kubasa. Vazhinji vanhu vanozviitira kumba, asi kune nhamba inoshamisa yemahofisi nenzvimbo dzebasa dzisingadzokorore. Chimbofunga nezve iyo huwandu hwemarara mapepa izvo zvinogona kudzokororwazve, uye izvo zviri kukandwa kure.
Dzidza zvakawanda nezve nharaunda. Kunyangwe iri kuverenga, kutarisa zvinyorwa, kana kuenda kuhurukuro.
Dzidzisa vamwe. Uye zvese zvaunodzidza kana zvaunoita paZuva repasi, iwe unogona kuzvipfuudza kune vamwe kuitira kuti vagopembererawo kuchengeta pasi nekukosha kwaro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Renewable simba » ZUVA repasi 2018 ichave Kubvumbi 22
Joseph Ribes akadaro
Mapepa ane rutivi rwakachena ini ndinoshandisa zvakare muprinta, kunyangwe vari kushambadza kana kuti vatoraswa neni.
Pindura kuna Josep Ribes
Basa nebasa rinowedzerwazve
Simba rezuva ... nemvura! Sero nyowani rezuva rine graphene